के तपाईंको घरमा रोप्नुभएको छ यी ७ बिरुवा ? थाहा पाउनुहोस् फाइदाहरु
एजेन्सी । बाहिरी वातावरण जति नै फोहोर र प्रदुषणयुक्त भएपनि आफ्नो घरभित्र भने सबैलाई स्वच्छ हावा नै मन पर्छ । यसैका लागि मान्छेले घरभित्र विभिन्न बोटविरुवाहरु रोप्ने गरेका छन् । के तपाईलाई थाहा छ किन यस्ता विरुवाहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् ?
पर्यावरणविदका अनुसार घरभित्र बोटविरुवाहरु रोप्नाले घरआँगनको हावा सफा रहन्छ । यसले कतिपय ब्याक्टेरियाहरुलाई पनि विनाश गर्न सक्छ । यसैकारण ती विरुवाहरु फाइदाजनक हुन्छन् । थाहा पाइराख्नुहोस् त्यस्ता ७ विरुवाहरु जुन घरभित्र रोप्दा फाइदाकारक हुन्छन् ।
यसको विरुवाले रातदिन अक्सिजन फ्याक्ने हुनाले यसले प्रदुषणलाई नियन्त्रण गर्छ र ब्याक्टेरियाहरुको विनाश पनि गर्न सक्छ । यसले नकारात्मक एनर्जीलाई खतम गर्ने विश्वास गरिन्छ । यसले रुघाखोकी र ज्वोरोलाई कम गर्न समेत प्रभावकारी काम गर्ने हुनाले यसलाई घरमा लगाउनुका धेरै फाइदाहरु छन् । साथै छाला सम्बन्धी रोगहरुलाई पनि यसले ठिक गर्न सक्छ र मुख गनाउने समस्याबाट समेत राहत् दिलाउन सक्छ ।
२. घिउकुमारी (एलोभेरा)
हावा स्वच्छ राख्नुका साथै यसमा धेरै मात्रामा भिटामिन्स, मिनिरल्स, एमिनो एसिड र फाइबर्सहरु पनि पर्याप्त मात्रामा हुन्छन् । पोलेको घाउहरुमा, काटेकोमा यसको प्रयोग गर्दा पनि धेरै राहत पाउन सकिन्छ । यससँगै यसले कपाल र छालालाई पनि फाइदा गराउँछ । यसको जुस पेटका लागि अत्यन्तै फाइदाकारक हुन्छ ।
हावालाई प्रदुषणमुक्त गराउनुका साथै यस फूलका पातहरुमा पर्याप्त मात्रामा एन्टिबायोटिकको गुण हुने भएकाले यसले लामखुट्टेलाई टाढा राख्न समेत मद्दत् गर्छ । छालासम्बन्धी रोग र चोटपटक लागेका बेलामा यसको फूलको रसले धेरै हल्का गराउन सक्छ । यसका पातहरुलाई पानीमा उमालेर कुल्ला गर्दा यसले दाँतको दुखाइलाई कम गराउँछ ।
४. करी पत्ता
यसले खानामा स्वाद बढाउनुको साथै यसको प्रयोगले कपाललाई स्वस्थ्य राख्न र रगत स्वच्छ राख्न पनि मद्दत् गर्छ । यसले डाइजेसन ठीक गराउँछ र मोटोपना कम गराउन पनि मद्दत गर्छ । डायविटिज नियन्त्रण गर्न र पोलेको घाउ ठीक गर्न पनि यसलाई प्रभावकारी मानिन्छ ।
यसले हावामा भएका टक्सिनहरुलाई हटाउन मद्दत् गर्छ र यसको फूलको बास्नाले घरमा ताजापनको महसुस गराउँछ । मुखमा घाउ आएमा र पेटमा किरा परेमा यसको पातहरु चबाउनु भयो भने धेरै राहत हुन्छ । टाउको दुखेमा यसको फुलको लेप लगायो भने प्रभावकारी हुन सक्छ ।
यसको बिरुवाले प्रदुषण कम गराउँछ । यसमा भिटमिन ए, सी र ई र यसका साथै फलिक एसिड र एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टि भायरल तत्वहरु प्रशस्त मात्रामा हुने हुनाले यसलाई विभिन्न कुरामा उपयोग गर्न सकिन्छ र यसका थुप्रै फाइदाहरु छन् । यसको रसमा एन्टिएजिङ र एन्टिअक्सिडेन्ट तत्वहरु पनि हुन्छन् जसले रगत बढाउन मद्दत गर्छ । यसले छालालाई विभिन्न समस्याहरुबाट टाढा राख्दै रगत सफा राख्दछ ।
यसले घरभित्रको हावालाई स्वच्छ राख्छ र वरिपरिको ब्याक्टेरिया र किराहरुलाई मार्छ । यसलाई घरमा राख्दा लामखुट्टेहरु समेत टाढा रहन्छन् । यसको फूलको रसले छालाको समस्यालाई राहत दिलाउँछ र टाउको दुखेको एवम् माइग्रेनलाई पनि ठीक गर्न सक्छ । यसले अनिद्राको समस्याबाट पनि छुटकारा दिलाउँछ ।